Ventral Tegmental Dopamine D2 Receptor ဖော်ပြချက်ကိုလျှော့ချခြင်းသည်မက်လုံးစိတ်ကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည် (2015) - သင့် ဦး နှောက်သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်
Ventral Tegmental Dopamine D2 receptor ဖော်ပြမှုလျှော့ချ selection ယ့ Motivation (2015) တိုးမြှင်
Neuropsychopharmacology ။ 2015 မတ်လ4။ Doi: 10.1038 / npp.2015.60 ။
de Jong က JW1, Roelofs တီဂျေ1, Mol FM ရေ1, Hillen AE1, Meijboom Ke1, Luijendijk MC1, ဗန် der Eerden HA1, သိမ်းသွင်း ထား. KM1, Vanderschuren LJ2, သွားလေ၏ RA1.
ပြောင်းလဲ mesolimbic dopamine အချက်ပြကျယ်ပြန့်စွဲလမ်းအပြုအမူအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။ အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဒီအလုပ်ဟာ striatum အတွင်း dopamine အာရုံစိုက်ထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်စွဲလမ်းအတွက် ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) တွင်အလိုအလျောက် inhibitory, somatodendritic dopamine D2 အဲဒီ receptor (D2R) ၏အခန်းကဏ္ဍများအတွက်ထွန်းသစ်စသက်သေအထောက်အထားရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် midbrain D2R စကားရပ်လူသားတွေအတွက်စွဲလမ်းထဲမှာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရထားပြီးလျော့နည်းသွား. ထိုမှတပါး, dopamine အာရုံခံအတွက် D2R အဲဒီ receptor (Drd2) ကုဒ်သွင်းသည့်မျိုးဗီဇ၏နောက်ကောက်ကြွက်တွေမှာကင်းဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုမြှင့်တင်ရန်ပြသလျက်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်, ဒီနေရာမှာကျွန်တော် shRNA knockdown သုံးပြီးအရွယ်ရောက်ပြီးသူကြွက်များ၏ VTA အတွက် D2R စကားရပ်လျော့ကျလာသောအယူအဆစမ်းသပ်ပြီး, ကိုကင်းသို့မဟုတ်အရေးပါတယ်လို့များစားစရာဘို့တုံ့ပြန်ကြွက်များတွင်စွဲတူသောအပြုအမူကိုအားပေးအားမြှောက်။ VTA D2R စကားရပ်လျော့နည်းသွားနှင့်အတူကြွက်များအားဖြည့်တဲ့တိုးတက်သောအချိုးအချိန်ဇယားအောက်တွင် sucrose နှင့်ကိုကင်းနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်သိသိသာသာတိုးလာလှုံ့ဆျောမှုပြသပေမယ့်ကင်းမိမိကိုယ်မိမိအုပ်ချုပ်ရေး၏ဝယ်ယူသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုထိခိုက်နစ်နာကြဘူး။
သူတို့ကအစတိုးမြှင့်ကင်း-သွေးဆောင် locomotor လှုပ်ရှားမှု, ဒါပေမယ့် Basal ရွေ့လျားမပြောင်းလဲမှုကိုပြသ။ ကျနော်တို့ fixed အချိုးတုံ့ပြန်, မျိုးသုဉ်းတုံ့ပြန်, reinstatement သို့မဟုတ်ကင်းနှင့် sucrose ရှာ၏အေးစက်ဖိနှိပ်မှုအတွက်မဆိုကွဲပြားခြားနားမှုကိုစောငျ့ရှောကျမပြုခဲ့ကတည်းကမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၌ဤကြံ့ခိုင်တိုး, အပြုအမူတိကျတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။
ကျနော်တို့ VTA D2R တိုးမြှင့်မက်လုံးပေးလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ရလဒ်တွေကို knockdown ကောက်ချက်ချပေမယ့်တိုက်ရိုက်စွဲတူသောအပြုအမူ၏အခြားရှုထောင့်မြှင့်တင်မထားဘူး။